Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Izindlela eziholela ekukhetheni okuhle kompompi wasekhishini
2020 / 11 / 19 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 5289 0
Ukukhetha ompompi basekhishini kungumsebenzi othokozisayo ongathola izinketho eziningi ezibonisa isitayela, ukuqina nokubukeka kumangalisa. Ngakolunye uhlangothi, kuyinto ekhohlisayo ukuthi awukwazi ukukhetha okungahleliwe nokuyekethisa amandla.
Nawa amanye amathiphu azosiza ekutholeni ompompi basekhishini abahle kakhulu njengompompi wowowow:
Khetha usayizi nokuphakama kwesokudla
Ngenkathi ukhetha ompompi basekhishini kubalulekile ukuthi ubheke usayizi nokuphakama ukuze uthole ukulungiswa okufanele. Osayizi abancane abanezindawo eziphakemeyo banika amanzi angadingekile. Ngaphezu kwalokho, kuya ngosayizi wesitsha lapho uzofaka khona ompompi.
Musa ukutshala imali eningi kakhulu
Emakethe ungathola izinketho eziningi njenge-matte black ekhishini ompompi nokunye okuningi, kepha ungatshali imali eningi ukuyithola. khumbula ukuthi ngenkathi utshala amandla nokuqina kwendaba kubalulekile kakhulu. Kubalulekile ukuhlakanipha ekusebenziseni inani nokukhetha izinketho ezingaphandle kwesabelomali, kufeza isidingo futhi kunikeze nokubukeka kwesitayela.
Ukudonsela phansi kuyindlela engcono
Njengezitayela ezintsha, izinketho zokusebenza ziyatholakala emakethe ngompompi. Ungathola kalula izinketho zokudonsa phansi nezinhlangothi. Isifutho sohlangothi oluphindiwe noma isifutho sohlangothi esisodwa isitayela esidala. Esikhundleni salokho kudonsela phansi okusha nokukhangayo futhi kusiza ukugwema ukuvuza kwamanzi. Inikela ngokuvaleka okusimeme ngokwengeziwe bese kufafazwa ohlangothini futhi kusiza ukugwema inkathazo ngokusebenza isikhathi eside.
Khetha isibambo esisodwa
Abantu abaningi bacabanga ukuthi ompompi abasebusweni ababili bahle futhi babukeka bekhanga. Bangompompi besitayela bendabuko obekuyisikhathi eside besendleleni. Kodwa ompompi owodwa wesibambo muhle impela ekuphatheni futhi unikeza ukulungiswa okuhle kakhulu ezingeni lamanzi. Ungaxuba kalula amanzi ashisayo nabandayo ngompompi abaphethe isibambo esisodwa bese uthola ukuxuba okuthe xaxa. Kulula ukuphatha nokuphatha njengoba kuqhathaniswa ompompi abasemaceleni.
Cabanga ngesitayela ngamandla
Abantu batshala imali ompompi ngokubheka isitayela, ukubukeka nomqondo. Isitayela sompompi asikho konke, kunezinye izinto eziningi ezidlala indima ekukhetheni njengokuqina, ukuphatha, okokusebenza kanye nentengo. ngakho-ke, ungatshali imali kumpompi wasekhishini ngokubheka nje isitayela. Kumele ubheke kuma-sinkholes, ukhethe phakathi kokuvamile futhi udilize izinketho bese ubheka ukufinyelela noma ukuphakama kompompi futhi.
Bheka ekuqedeni okuhle
Ngokufuna ompompi ofanele kuyadingeka ukubheka ukuqedwa kompompi kuqala. umatte omnyama udonsa phansi umpompi wasekhishini ubukeka umxhwele futhi ukhanga ngesitayela sasekhishini. Ngaphezu kwalokho, ungayivumelanisa nombala nesitayela samakhabethe akho ekhishi. Kubalulekile ukukhetha isiphetho esifanelekile ukugwema ukulimala nebala kusuka ompompi isikhathi eside. Noma ukuyenza iqine futhi isetshenziswe isikhathi eside.
Edlule :: Isinyathelo ngesinyathelo Umhlahlandlela Wokulungisa nokuthi Ungathenga Kanjani ompompi ku-inthanethi Olandelayo: Qedela Izinyathelo Zomhlahlandlela Wokuthi Ungayifaka Kanjani Iringithoni
2021 / 01 / 10 1579
2021 / 01 / 10 1239
2020 / 12 / 21 6170
2020 / 11 / 19 4820
2020 / 11 / 18 5031
2020 / 11 / 16 5067
XHUMANA NATHI UCINGO: 3476134901 I-imeyili: sale@wowowfaucet.com